ESI EDOZI PASWỌỌDỤ MAKA WI-FI NA ASUS RAWỤTA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi edozi paswọọdụ maka Wi-Fi na Asus rawụta
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji chebe netwọk ikuku gị, nke a dị mfe iji mee. Enwetala m otú m ga-esi tinye paswọọdụ na Wi-Fi, ọ bụrụ na ịnwe onye ntanetị D-Link, oge a anyị ga-ekwu banyere ndị na-ewu ewu na-ewu ewu - Asus.
Akwụkwọ ntuziaka a kwekwara ka ndị na-ahụ Wi-Fi dị otú ahụ dị ka ASUS RT-G32, RT-N10, RT-N12 na ọtụtụ ndị ọzọ. Ugbu a, nsụgharị abụọ nke Asus firmware (ma ọ bụ kama nke ahụ, interface weebụ) dị mkpa, a ga-atụle ọnọdụ ntọala maka onye ọ bụla n'ime ha.
Ịtọ ntọala netwọk ikuku na Asus - ntụziaka
Nke mbụ, gaa na ntọala nke onye ntanetị Wi-Fi, ime nke a na ihe nchọgharị ọ bụla na kọmputa ọ bụla jikọtara ya na waya ma ọ bụ na-enweghị ha na router (mana nke dị na waya), tinye 192.168.1.1 na ebe nkwụsị adreesị adreesị nke interface weebụ nke Asus routers. Na arịrịọ maka nbanye na paswọọdụ, tinye ha na admin. Nke a bụ nbanye nbanye na paswọọdụ maka ọtụtụ ngwaọrụ Asus - RT-G32, N10 na ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ọ dị, biko rịba ama na edepụtara ozi a na ihe nkwụnye na azụ nke router, ma nke a, enwere ohere na gị ma ọ bụ onye guzobere Onye na-enye ihe ntanetị agbanweela paswọọdụ.
Mgbe ntinye ziri ezi, a ga-akpọrọ gị gaa na isi nke Asus Ngwaọrụ weebụ, nke nwere ike ịdị ka oyiyi ahụ dị n'elu. N'okwu abụọ ahụ, iwu nke omume iji tinye paswọọdụ na Wi-Fi bụ otu ihe ahụ:
Họrọ "Ikuku Ntanetị" na menu na ekpe, ntọala Wi-Fi ga-emeghe.
Iji setịpụ paswọọdụ gị, ezipụta usoro nyocha (WPA2-Personal ka akwadoro) ma tinye paswọọdụ achọrọ na "Pre-shared WPA Key" ubi. Okwuntughe ga aghaghi inwe ihe odide asatọ na akwukwo odidi Cyrillic ka ekwesighi iji mee ihe mgbe o na-eke ya.
Nke a mezue ntọala paswọọdụ.
Ma rịba ama: na ngwaọrụ ndị ị na-ejikarị na Wi-Fi na-enweghị okwuntughe, ntọala netwọk a zoputara na-enweghị nyocha ọ bụla, nke a nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị jikọọ, mgbe ịtọsịrị paswọọdụ, laptọọpụ, ekwentị ma ọ bụ mbadamba nkume ga- kọọ ihe dị ka "enweghị ike ijikọ" ma ọ bụ "Ntọala netwọk echekwara na kọmputa a anaghị emezu ihe ndị a chọrọ" (na Windows). Na nke a, hichapụ netwọk echekwara, re-chọta ya ma jikọọ. (Maka nkọwa ndị ọzọ na nke a, lee njikọ na mbụ).
Asus Wi-Fi paswọọdụ - nkuzi vidiyo
Ma, n'otu oge ahụ, vidiyo banyere ịmepụta paswọọdụ dị iche iche nke ndị na-ahụ maka wireless wires nke ika a.